स्थानीय सरकारमा सुविधा मोहः एक वर्षमा पौने अर्ब गैरकानूनी भत्ता – abcnepali
1 month ago Tuesday, September 17, 2019abcnepali
जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता ! लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकमा सुन्दै अनौठो लाग्ने यो प्रसंग काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, ३२ जना वडाध्यक्ष, १२५ वडा सदस्य र मनोनीत ३ सदस्य समेत गरी १६२ जना जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा जनही रु. १२ हजारका दरले पोशाक भत्ता लिए । पोशाक भत्ताका लागि राज्यकोषबाट रु. १९ लाख ४४ हजार खर्च गरियो । महानगरपालिका वित्त विभाग प्रमुख प्रबीण प्याकुरेल भन्छन्, “मेयर र उपमेयरलाई बैंक तथा अरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत पोशाक भत्ता वितरण गरिएको थियो ।”
एक पटक पोशाक भत्ता लिएर जनप्रतिनिधिको चित्त बुझेन, आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा तिनले पोशाक भत्ता झन् बढाए । यसमा रु।२५ लाख सकियो । मेयर शाक्यले वर्षको एकपल्ट पोशाक भत्ता लिने चलन देशैभर रहेको र कार्यालयमा निश्चित पोशाक लगाउँदा पहिचान झल्कने भएकाले भत्ता वितरण गरिएको जिकिर गरे । शाक्य भन्छन्, “अहिले सहकारी र बोर्डिङ स्कूलले त ड्रेस भत्ता दिन्छन् भने महानगरले दिन किन मिल्दैन ?”
अर्को उदाहरण, रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा छ । यहाँका ७३ जना जनप्रतिनिधिहरूले २६ चैत २०७४ को नगरसभाबाट ‘ड्रेसकोड’ लागू गर्ने निर्णय गरेर रु.७ हजार ५०० का दरले रु.५ लाख ५० हजार पोशाक भत्ता लिए । २०७४-७५ मा ७ हजार ५०० का दरले भत्ता लिएका उनीहरूले २०७५र७६ मा त्यसलाई बढाएर रु.१० हजार पु¥याए । बढेको दरमा यो अङ्क वार्षिक रु.७ लाख २२ हजार ७०० हुन आउँछ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी भन्छन्, “नगरसभाको निर्णयका आधारमा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएको हो, भत्ता रकम हामीले जनप्रतिनिधिकै खातामा पठाइदिएका छौं ।”
महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर), बैतेश्वर गाउँपालिका (दोलखा), धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे), त्रियुगा नगरपालिका (उदयपुर), पूर्वचौकी गाउँपालिका (डोटी), कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), ग्रामथान गाउँपालिका (मोरङ्ग), इलाम नगरपालिका (इलाम) तथा माथागढी गाउँपालिका (पाल्पा)का जनप्रतिनिधिले समेत विधिको दोहोलो काढेर पोशाक भत्ता बुझेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले २०७४र७५ मा बैठक भत्ताबापत रु.१ करोड ८७ लाख ३९ हजार लिए । दोहोरो सुविधामा जनप्रतिनिधिको अचाक्ली मोह देखियो । असार अन्तिममा पेश्की शीर्षकमा रु.१ करोड ४५ लाख ५७ हजार लिएका उनीहरूले विभिन्न मितिमा थप रकम बुझेका थिए ।
अनौठो त के भने त्यो भत्ता विकासका लागि केन्द्र सरकारले दिएको समानीकरण अनुदानबाट लिइएको थियो । यसमध्ये पदाधिकारी बैठक भत्ता रु.३८ लाख ४७ हजार र नगरसभा बैठक भत्ता रु. ७ लाख १५ हजार थियो ।
तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी र उपमेयर गुमादेवी आचार्य सहित १९ वडाकै जनप्रतिनिधिले वडा समितिको बैठक बापत रु.४० लाख १० हजार भत्ता लिए । मेयर सुवेदीले हाकाहाकी भने, “जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिई काम गर्न सक्दैनन् । वडा समितिमा ३८ प्रकारका बैठक हुन्छन्, अनि बैठक भत्ता नै नदिने त रु” उनको भनाइ थियो, “हामीले बैठक भत्ताको बाटो खुलाइदिन नगरसभाबाटै प्रदेश सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।”
त्यसैगरी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेशसभाबाट कानून नबन्दै पारिश्रमिक बापत रु. १ करोड ५ लाख ९५ हजार ८८८ लिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल कानून भूतप्रभावी नहुने भएकाले कानून नबन्दै भत्ता लिनु गैरकानूनी भएको बताउँछन् ।
तर, जनप्रतिनिधि भने गैरकानूनी भत्ताप्रति बेपरबाह देखिएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउने नारा सहित निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्येय भत्ता र सुविधामा गएको छ । जस्तो कि, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा नाम मात्रको एजेण्डा राखेर बसेको बैठक बापत रु. १० लाख ५ हजार भत्ता लिएका छन् । ती बैठकबाट दशैं–तिहारको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मासिक बैठक बस्ने, योजना अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि शुभकामना दिने, अर्को बैठक बस्ने, मोटरसाइकलको बीमा गर्ने जस्ता नियमित प्रशासनिक काम सम्बन्धी निर्णय गरेर रु. ७० हजार बैठकभत्ता लिएको देखिन्छ ।
पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिकामा प्रत्येक योजनाको एउटाका दरले बैठक गरेको देखाएर रु. ६ लाख १० हजार तथा चारपाङ्ग्रे सवारी र मोटरसाइकल खरीद तथा मूल्यांकनका लागि भन्दै बैठक बसेर रु. ९६ हजार भत्ता लिइएको देखिन्छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा कानूनतः भत्ता लिन नमिल्ने विपत् सञ्चालन निर्देशन, नगर शिक्षा र सामाजिक समितिका सदस्यले पनि रु.२ लाख ३० हजार भत्ता लिएका छन् । प्रदेश–३ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा न्यायिक, विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
बैठक भत्ता पाउने प्रावधान राखेका प्रदेश सभाहरूले बनाएका ऐनमा समान व्यवस्था छ । जसमा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले महीनामा तीन वटा बैठक, वडासमिति सदस्यले दुई वटा, विषयगत समितिले एउटा र न्यायिक समितिका सदस्यले दुई वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । मोरङको जदाहा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले ३० पटकसम्म बैठक बसेको अभिलेख बनाएर रु १२ लाख ८८ हजार भत्ता लिएका छन् ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका जनप्रतिनिनिधिले २०७४र७५ मा दशैं खर्च भनेर रु.६ लाख ८८ हजार लिएका छन् । चाडपर्वको खर्च लिने मन्थलीका जनप्रतिनिधि अपवाद होइनन् । रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च भनेर रु. ७ लाख र सिस्ने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु.४ लाख ७३ हजार बुझेका छन् । त्यसैगरी, संखुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिकामा २९ जना जनप्रतिनिधिले दशैं खर्च बापत रु.५ हजारका दरले रु.१ लाख ४५ हजार लिए ।
जनप्रतिनिधिले चाडपर्व भत्ता लिनेमा बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका (रु. ३ लाख २३ हजार), कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका (रु. ३ लाख २३ हजार), कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका (रु. २ लाख ८६ हजार), डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका (रु.४ लाख ८० हजार), डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका (रु. २ लाख २० हजार), दैलेखको गुराँस गाउँपालिका (रु.२ लाख ७ हजार) पनि छन् । यो सूची जति खोज्यो, उति तन्किंदै जान्छ ।
संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार जिमी र उपमेयर शोभा घिमिरेले मोटरसाइकल, स्कूटर, ल्यापटप, डेक्सटप कम्प्युटर, घरभाडा र मोबाइल फोन सुविधा लिएका छन् । प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी कानून बनाउनुअघि नै यी सुविधा बापत उनीहरूले रु. ४७ लाख ७२ हजार लिएका थिए ।
संखुवासभाकै मकालु गाउँपालिकाका पदाधिकारीले मोटरसाइकल, मोबाइल फोन र टेलिभिजन सुविधा बापत रु.८ लाख ८३ हजार ७९६ लिएका छन् भने मोरङको जदाहा गाउँपालिका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डल, उपाध्यक्ष शालो शाह र वडाध्यक्षहरूले २३ थान मोबाइल फोन किन्न रु. ५ लाख ६१ हजार ७४५ खर्च गरेका छन् ।
ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले थप सुविधा बापत भन्दै रु. १४ लाख ४० हजार ३३२, ओखलढुंगाकै मोलुङ र चिसंखुगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दैनिक भ्रमण भत्ता र अनुगमन खर्च भनेर क्रमशः रु. २१ लाख र १७ लाख २८ हजार ३७० लिएका छन् ।
मेयरलाई रु. २ लाख ४३ हजारका मोबाइल
मोबाइल सुविधा लिनेमध्ये रौतहटको माधवनारायण (रु. ९ लाख ६० हजार) सप्तरीको विष्णुपुरा (रु.२ लाख २९ हजार) राजगढ (रु. २ लाख ५९ हजार), राजविराज (रु.४ लाख ६६ हजार), डङ्केश्वरी (रु.७५ हजार), बाराको विश्रामपुर (रु.१ लाख ७२ हजार), महागढीमाई नपा (रु.२ लाख ३० हजार), महोत्तरीको गौशाला (रु. २ लाख २० हजार) रहेका छन् ।
तीमध्ये माधवनारायणका सबै ५१ जना जनप्रतिनिधिले मोबाइल किनेका छन् । महोत्तरीको गौशाला नपाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले रु. १ लाख ४३ हजार पर्ने ‘एप्पलको एस टेन’ र ८७ हजार मूल्यको सामसङको ‘जी ९९५एफ’ किनेका छन् । महतो भन्छन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई र उपमेयरलाई मोबाइल किनेर दिएकोले लिएको हुँ । अहिले एप्पलको चाहिं नगरपालिकालाई बुझाएँ ।”
विराटनगर महानगरपालिकाले मासिक सुविधा भन्दै अतिरिक्त रु. १७ लाख ६४ हजार जनप्रतिनिधिहरूलाई भुक्तानी दिएको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट, बेगनाशकाली र पूर्वखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, धनुषाको विदेह गाउँपालिकाका पदाधिकारीले पनि अतिरिक्त सुविधाका नाममा अनधिकृत सुविधा लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनका अनुसार २०१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदाधिकारी सुविधाका नाममा राज्यकोषको रु.२२ करोड ३७ लाख ३० हजार दुरुपयोग गरेका छन् ।
पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री चाहिं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सांसदले दोहोरो सुविधा त्यागेर कठोर कानून बनाउने र अनुगमन गर्ने हो भने अहिलेको विकृति कम हुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “माथि विकास बजेट बोकेर ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति बन्द गरियो भने मात्र तलका ३६ हजारलाई सुधार्न सकिन्छ ।”
खोज पत्रकारिता केँदको रिर्पोट साभार गरिएको हो ।
झापामा रहेको विप्लवको गोप्य कार्यालयमा प्रहरी छापा
भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो माथि ड्रोन आक्रमण
विवादमा चिया विकास निगम : लेखिँदै प्रतिवेदन, उठ्ला बक्यौता रकम?
डा. के.आर. खम्बुको नजरमा माईपोखरी
बर्खे बिकासले सडक अवरुद्ध